मेयर बालेन शाहले भने- यो वर्ष कुकुर तिहार विश्वभरी मनाउँछौँ
June 8, 2022 N88LeaveaComment on मेयर बालेन शाहले भने- यो वर्ष कुकुर तिहार विश्वभरी मनाउँछौँ
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर बालेन शाहले यो वर्ष कुकुर तिहार पर्व विश्वभर मनाउने योजना रहेको बताएका छन् । वुधबार नेपालका लागि फ्रान्सेली राजदूत गिल्स बोरबाओसँग भेटवार्ता गर्दै शाहले यस्तो बताएका हुन् । उनले राजदूत बोरबाओसँग नेपालको कला र संस्कृति फ्रान्स लगायत विश्वभर प्रबर्द्धन गर्न चाहेको बताए । त्यस्तै, उनले राजदूत बोरबाओसँग सो पर्वमा फ्रान्सेली जनता पनि […]
काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्डक्सन चुल्हो, क-कसले पाउँछन् फाराम भर्न ?
June 8, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्डक्सन चुल्हो, क-कसले पाउँछन् फाराम भर्न ?
काठमाडौं । काठमाडौंमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्न सरकारले आवेदन मागेको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सूचना जारी गरेर आवेदन मागेको हो । यसरी निःशुल्क बाँडिने चुल्होका लागि लोपोन्मुख, आदिबासी जनजाति तथा दलित वर्गका विद्यार्थीले आवेदन दिन सक्नेछन्। काठमाडौं बाहिरबाट उपत्यकामा आएर स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने यी वर्गका विद्यार्थीले […]
डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने
June 8, 2022 N88LeaveaComment on डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी काठमाडौंबाट चुनाव लड्ने
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषी यमी भट्टराई आउँदो आम निर्वाचनमा काठमाडौंबाट उम्मेदवार बन्ने भएकी छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ वडा ७ मध्ये एउटा क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा निर्वचनमा उम्मेदवार बन्ने उनको तयारी छ । भट्टराईले आफूलाई चुनाव लड्न प्रस्ताव आएको र आफूले स्वीकारेको बताइन् । ‘पार्टीभित्र पनि युवा […]
जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ २६ गते बिहीबारकाे राशिफल
June 8, 2022 N88LeaveaComment on जे बर मागे पनि पूरा हुने सुपादेउराली मन्दिरकाे दर्शन गरी हेर्नुस् जेठ २६ गते बिहीबारकाे राशिफल
मेष राशि : टाढाको यात्राको योजना बन्न सक्छ। आफ्नो मनपर्ने खानाको आनन्द लिनुहोस्। वरिष्ठबाट मार्गदर्शन मिल्नेछ । जीवनसाथीको स्वास्थ्यमा चिन्ता रहनेछ । स्वास्थ्य कमजोर रहनेछ । धन आर्जन गर्न सजिलो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गमा सफलता मिल्नेछ। पढाइमा रुचि बढ्नेछ। अशान्ति रहनेछ। वृष राशि : प्रतिद्वन्द्वी बढ्नेछ। पारिवारिक चिन्ता बढ्नेछ। अत्यावश्यक वस्तु समयमै उपलब्ध हुने छैनन् । […]
खुट्टाबाट दुर्गन्ध आउछ भने हटाउने यी घरेलु उपायहरु
June 8, 2022 N88LeaveaComment on खुट्टाबाट दुर्गन्ध आउछ भने हटाउने यी घरेलु उपायहरु
गर्मीयाम सुरु भएसँगै मानिसमा सास गन्हाउने समस्या हुन्छ । त्यस्तै, कतिपयलाई खुट्टाबाट अत्यधिक दुर्गन्ध आउने समस्या पनि हुन्छ । खुट्टाको दुर्गन्धले लाजमर्दो मात्र नभई चिलाउने, दाग हुने, ब्याक्टेरिया र फंगल इन्फेक्सन पनि निम्त्याउन सक्छ। यदि तपाई पनि गर्मीमा खुट्टाको दुर्गन्धबाट दिक्क हुनुहुन्छ भने चिन्ता नलिनुहोस् किनकी आज हामी तपाईलाई यसबाट बच्ने केही सजिलो र घरेलु […]
आजकाे माैषम पूर्वानुमान : हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना !
June 8, 2022 N88LeaveaComment on आजकाे माैषम पूर्वानुमान : हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना !
काठमाडाैं । देशको अधिकांश भू–भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने भएको छ । हाल नेपालको पूर्वी भू–भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव र मध्य तथा पश्चिमी भू–भागमा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ । उक्त प्रणालीको प्र्रभावले प्रदेश नं १, मधेस प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सामान्यदेखि […]